Mandalo kihon-dalana sarotra ny firenena hoy ny antoko UNDD - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanangona JRR il y a 2 mois
Nampiantso mpanao gazety ny antoko politika UNDD ny zoma faha- 12 marsa 2021. Namoaka fanambarana izy ireo izay tahaka izao ny ambarany manontolo.
Mikasika ny raharaha anatin’ny antoko anatin’ny antoko UNDD dia najoro ny Birao Politika vaovaon’ny Antoko UNDD izay ahitana mpikambana enina amby roapolo (26) ka i Manoro Régis no mitazona ny andraikitra maha-Sekretera Jeneraly azy no sady miandraikitra ny toeran’ny Filoha Nasionaly mandra-pahavitan’ny Kongresy manaraka.
Naneho ny heviny koa ny antoko politika mahakasika ny raharaham-pirenena.
Nilaza ny antoko fa miara-mahita ny hirifirin’ny zavatra andalovan’ny firenena sy ny vahoaka Malagasy amin’izao vanim-potoana izao, ny tsirairay ka tsy ilaina ho tanisaina intsony.
Manoloana izany dia manambara amin’ny fomba mazava sy tsy mivilivily ny UNDD fa mandalo kihon-dàlana sy fotoan-tsarotra indray ny firenena.
Noho izany, amin’ny maha-izy azy sy araka ny foto-kevitra, soatoavina ary ‘éthique’ politika nitaizana ny mpikambana ao aminy sy nolovàny tamin’i Profesora Zafy Albert, dia tsy afaka hitazam-potsiny an’izany ny antoko UNDD.
Mahatsiaro tena ho manana zo sy andraikitra hijoro sy hitondra ny anjara- birikiny amin’ny fiatrehana sy fitadiavana vaha-olana amin’izany ny antoko UNDD.
Ny vaha-olana dia tsy maintsy miainga sy mifototra amin’ny firaisankina, fiaraha-mientana sy fivondronanan’ny Malagasy rehetra. Raha jerena amin’ny fomba maimaika sy tsotsotra dia ohatry ny fifanandrinana politika misy amina vondron’olona roa no mahoraka eto : ny mpitondra sy ireo mamaritra ny tenany ho mpanohitra.
Tsy io fifanandrinana miendrika ho fifandiran’olona roa anefa no tena zava-dehibe fa ny krizy mangirifiry mianjady amin’ny vahoaka Malagasy rehetra manerana ny Nosy. Ka io no tokony hiarahantsika mibanjina sy miatrika ary hiarahantsika mitady vaha-olana maika.
Ny Antoko UNDD dia milaza mazava fa an’i Madagasikara manontolo ny olana ka i Madagasikara manontolo no tokony hiara-misalaha mamaha azy.
Ny Antoko UNDD dia misintona ny saintsika ary tsy misalasala ny milaza fa amin’izao krizy mafy diavin’ny firenena ary mbola ahina ho mafy dia mafy izao dia tsy vaha-olana ny fanonganam-panjakana. Nefa manindry mafy ihany koa anefa ny UNDD fa asa vadi-drano ny raharaham-pirenena ka andao isika rehetra hiara-misalahy hamadika ny pejin’ny fahantran’ity tanindrazana iombonana ity, hiara-misalahy hanorina firenena vaovao sy vanona.
(1) - Manao antso amin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Fitondrana izay tarihiny ny Antoko UNDD mba handray ny fepetra rehetra azony atao mba hirosoana amin’izany sy hametrahana filaminana maharitra eto amin’ny firenena sy hampihavanana marina ny Malagasy mba tena hahazoana miroso tsy misy sakantsakana amin’ny asa fampandrosoana;
(2) - Manao antso avo amin’ny Antoko politika rehetra hanao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja hananganana firenena mendrika ny taranaka fara-mandimbintsika;
(3) - Manao antso avo amin’ny hery velona rehetra hiara-mientana hampijoro Repoblika Malagasy vaovao, miray ao anatin’ny fahasamihafana, mitsinjara fahefana, mandroso amin’ny fomba mirindra, mihavana tanteraka ary mahatsiaro fa tena ‘samy Malagasy’ feno.
(4) - Manainga ny mpikambana sy sampa-mangaikan’ny UNDD manerana ny Nosy mba hijoro sy hanao ho vaindohan-draharaha ny ezaka rehetra ho amin’ny fanatanterahana ireto fanapahan-kevitra ireto.
Nilaza ny UNDD fa tsy manana ambara mikasika ny hetsika hataon'ny mpanohitra.
Tsy mitaky fiaraha-mitantana koa ny UNDD.
Ampahany amin’ireo mpikambana anatin’ny birao politika vaovao
01- MANORO Régis
Secrétaire Général, Président National p.i
02-MAN0RIKY Sylvain, Fondateur, Inspecteur Général
03- BOTO Jean, Trésorier National
04- BETIANA Bruno, Inspecteur Général
05-GASTON Alphonse, Conseiller
06-MIHAMITSY Cyrille, Inspecteur Général
07- ANDRIAMAHAVITA Jean Aimé, Conseiller
08-RATSIAZO Léa, Responsable Communication
09-RASOALISOA Germaine, Responsable animation
10-RAZAFINDRAMANGA Joséphine dite ’Josie’, Conseillère
11- ZAFY Jaomalaza Richard dit ‘Titus’, Conseiller
12-RANDRIAMIHARISOA Joseph, Inspecteur Général
13-MARCEL Bernard, Trésorier National Adjoint
Fanehoan-kevitra : « Mutant sy variant » koa ve ny olombelona ? - il y a 10 jours